आफ्नै घरमा बिरानो भएर बस्नुपरेको छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
म सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा बस्छु । मेडिकल टेक्निसिएन र सुपरभाइजर हुँ । धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १० वर्षदेखि कार्यरत छु । अस्पतालमा सीसीटिभी जडान गर्ने, अक्सिजन, भेन्टिलेटरका सामान बिग्रँदा बनाउने, परीक्षणशालालाई संक्रमणमुक्त बनाउने काम गर्छु ।
अस्पतालबाट मेरो घर लगभग ६०० मिटर टाढा छ । मेरा दुईजना बहिनी पढाइ र कामका सिलसिलामा काठमाडौँमा बस्थे । लकडाउन हुनुअघि नै उनीहरूलाई घर बोलाएका थियौँ । अहिले हाम्रो घरमा बुबा–आमा, श्रीमती, म, दुई जना बहिनी र मेरी छोरी गरी सात जना बस्छौं । मेरा भाइ-बुहारी जर्मनीमा बस्छन् । मेरी दिदी पढाइका सिलसिलामा अष्ट्रेलिया हुनुहुन्छ ।
लकडाउन भएसँगै हामी घरमा सतर्क भएर बस्न थाल्यौं । काममा भने म निरन्तर जाने गर्थें । सामान्य नै चलिरहको थियो जीवन । दिदी र भाइसँग हामी सधैंजसो फेसबुकमा कुरा गछौँ । घरमा सबै भएकाले मेरी सानी छोरी झनै खुसी भएकी थिइन् । तर धनगढीमा कोरोनाका बिरामी फेला परेपछि सबै जना अत्तालिए । मेरो घरमा पनि मैले जागिर छोडे हुने भन्न थाले । ‘आफू बाँच्नुपर्‍यो जागिर त पछि पनि पाइन्छ नि’, बुबाले भन्नुभयो । विदेशमा भएका भाइ र दिदी र यहीँ भएका घरका अरूले पनि गाह्रो भए जागिर छोड भन्न लागे । तर मैले आफ्नो पेशा छोडन भने सकिनँ । यस्तो विपत्‌का बेला जागिर कसरी छोड्नु ? यस्ता बेलामा पनि काम गर्नु मेरो धर्म हो नि भनेर मनले मानेन ! मैले घरमा ‘केही हुन्न, म सावधानी अपनाउँछु’ भनेर सम्झाएँ । उनीहरूले बुझे कि बुझेनन् थाहा छैन ।
पहिलो पल्ट पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट) हातमा पर्दा मलाई डर लागेको थियो । साथै जिम्मेवारी बढे जस्तो पनि महसुस भयो । पीपीई लोकल भएकाले के कति सुरक्षित छ भन्ने लागेको थियो । तर यस्तो परिस्थितिमा पछि हट्नु हुन्न भन्ने लागेर म र मेरा साथीहरू काममा लाग्यौं । कोरोनाको केस आएपछि ल्याब, कोठा, बिरामीले ओछ्याएका तन्ना संक्रमणमुक्त बनाउने काम गर्न थाल्यौं । यसो गर्दा आफूलाई पनि संक्रमण हुन्छ कि भन्ने डर लागेको थियो । अस्पतालमा भयाभह स्थिति हुन्छ जस्तो लागेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन । नहोस् पनि !
लकडाउनले गर्दा सबैको जीवनमा असर पक्कै गरेको छ । मेरो दिनचर्या पनि फेरिएको छ । धनगढीमा कोरोना संक्रमित फेला परेदेखि म आफ्नो घरको तलको तलामा एक्लै बस्न थालेँ । आमा-बुबाको उमेर पनि ढल्कँदै गएको छ, छोरी पनि सानी छे । उनीहरूलाई केही होला कि भन्ने डरले म उनीहरूको सम्पर्कबाट टाढा भएर बस्न थालेँ ।
पहिले म दुई वर्ष जति आध्यात्मिक अभ्यासतिर लगेकाले घरमा आफैले पकाएको मात्रै खाने गर्थेँ । कतै बाहिर जानुपरे फलफूल मात्रै खाने गर्थें तर कोरोनाले गर्दा अहिले घरमा सबैले पकाएको खान्छु । खाना पानी आदि दिनुपर्दा सबै छाउ बारेका महिलालाई जसरी टाढैबाट दिन्छन् मलाई । म भान्सामा गएको छैन । माथिल्लो तला गएको छैन । मैले खाएका थालबटुका पखालेर घाममा सुकाएपछि मात्रै माथि कोठामा लग्छन् । साँझ अस्पतालबाट फर्किएपछि सधैं नुहाएर लुगा पखालेर अर्को लुगाएर मात्रै सुत्छु ।
बाहुनको छोरा भएर पनि होला धर्मकर्म गर्न मन लाग्छ । अहिले पनि म पहिलेको जस्तै गरी नुहाइधुवाइ पूजापाठ नियमित गर्छु साँझ बिहान ।
अस्पतालमा काम गर्ने भएकाले मैले चार वर्षकी छोरीलाई समात्न पनि पाएको छैन । ऊसँग खेल्न पनि पाएको छैन । ऊ ‘बाबा’ भन्दै नजिक आउन खोज्छे तर म हुन्न भन्दै टाढा जान्छु । उसलाई खेलेको जस्तो हुँदो रहेछ झन् मेरो पछि दौडिन्छे । उसको मम्मीले हुन्न भन्दा पनि ऊ जिद्दी गर्छे मसँग आउनलाई । भोलि खेलौँला भन्छु तर त्यो भोलि कहिले आउँछ होला खै ? अचेल बिहान म अफिस जाँदा छोरीले माथिबाटै ‘बाबा बाई’ भन्दै ‘फ्लाइङ किस’ गर्छे ।
हामीले तलका अरू कोठा भाडामा दिएका छौं । त्यहाँ बस्नेहरू सुरुमा डराएका थिए । तर अहिले उनीहरू पनि डराउन छाडे । मेरो परिवारले पनि अहिले साथ दिएको छ राम्रो काम गरेको भनेर । साथीभाइ भने मैले कोरोना सारौँला भन्ने डरले टाढै हुन्छन् ।
अहिले कामको चाप बढी छ अस्पतालमा । नयाँ फाँटहरू सेटअप गर्नुपर्ने हुनाले पनि अहिले धेरै गाह्रो छ । नयाँ फाँटहरू भनेको कोरोना संक्रमितका लागि प्रयोगशाला, एकस्रे, आईसीयुमा चाहिने सामानहरू भएको कोठाहरू हुन्, जसको व्यवस्थापन हामीले नै गर्नुपर्छ, केही बिग्रँदा आफै गएर हेर्नुपर्छ । पुरानो अस्पतालका कोठाहरूमा सीसी क्यामेरा, अक्सिजन, बेडको सेटअप सबै हामीले नै गर्नुपर्छ । अग्रपंक्तिमा काम गर्नेमा डाक्टर, नर्स र सफाइ कर्मचारीको नाम आउँछ । हाम्रो नाम आउँदैन । त्यति बेला अलि खल्लो पनि लाग्छ । हामीले दिनैपिच्छे ८ देखि १० फाँटमा जानुपर्छ । अस्पतालमा कुन कोठामा कतिखेर के बिग्रिन्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ । तर हाम्रो काम अलि छायाँमा परे जस्तो लाग्छ मलाई । तर पनि विपत्‌मा सक्दो काम गर्छु भन्ने अठोट लिएको छु । अनि आफ्नो परिवारसँगै बस्ने दिन कहिले आउला भनेर दिनगन्ती गर्छु ।
अब हाम्रो पनि पीसीआर जाँच गर्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यसको रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यसका आधारमा कामबाट छुट्टी लिएर घरमा एक्लै बस्ने कि काममा जाने भन्ने निधो हुन्छ । अस्पतालमा थप संक्रमित आए भने के गर्नु भन्ने पनि लाग्छ ।
यो कथा अरुण पनेरुसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर अनुषा स्वाँरले लेख्नु भएको हो ।
संकटलाई अवसरमा बदल्ने विचार
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०७:३१